Fikarakarana alika misy leishmaniasis | Tontolo alika
La leishmaniasis na leishmaniasis dia aretina manimba ny hery fiarovan'ny vatana ny alika ary ampitaina amin'ny parasite antsoina hoe Leishmania. Ho setrin'izany, ity katsentsitra ity dia miditra amin'ny vatanao amin'ny alàlan'ny kaikitry ny moka voan'io, ny amandy. Mety hisy fiatraikany amin'ny alika misy karazany, taona na habe, ary mitondra soritr'aretina lehibe ho an'ny vatany.
1 Karazana leishmaniasis
3 Fitsaboana sy fikarakarana
4 Fomba fisorohana aretina
Areti-mifindra izy io izay mety misy karazany roa:
Leishmaniasis amin'ny hoditra: miteraka fihenan'ny volo amin'ny faritra samihafa amin'ny vatana, toy ny manodidina ny maso, orona ary sofina. Ary koa ny fisehoan'ny fery amin'ny hoditra, fitomboan'ny hoho tsy mifandanja sy ny fananganana nodulo.
Leishmaniosis Visceral: Miteraka fatiantoka mavesatra, olana amin'ny voa, tazo ary fivontosan'ny kibony. Ho fanampin'izany dia misy fiatraikany amin'ny taova anatiny toy ny limpa, aty ary ny tsokan-taolana.
Tsy voatery hitranga daholo na ny bika aman'endriny miankina amin'ny fanjakan'ny aretina. Saingy, amin'ny teny ankapobeny, azontsika atao ny manonona ireto manaraka ireto:
Fitsaboana sy fikarakarana
La leishmaniasis tsy misy fanasitranana, fa azonay atao ny manamaivana ny soritr'aretinao amin'ny fitsaboana ara-batana mety. Miorina amin'ny zava-mahadomelina toy ny Meglumine Antimonate, Miltefosine ary Allopurinol, na dia miankina amin'ny tranga manokana tsirairay aza izany.
Na izany aza, azontsika atao ny mamita an'io fitsaboana io amin'ny fikarakarana hafa izay hanampy betsaka amin'ny alikantsika.
Sakafo manokana. Ny alika voan'io aretina io dia tokony hihinana sakafo manankarena antioksida sy asidra matavy omega 3 ary omega 6. Zava-dehibe ihany koa ny tsy fihinan'izy ireo fôforôra avo lenta ary omenay proteinina mora levona izy ireo. Misy fahana manokana momba an'io; ny mpitsabo biby dia hahafantatra ny fomba hanomezana torohevitra ny marina.
Hydration tsara. Indraindray io aretina io dia mahatonga ny alika tsy hisotro ampy. Tsy maintsy ampirisihintsika ny hidradradradra tsara ny biby, satria io dia manampy ny taova hiasa tsara kokoa.
Fanatanjahan-tena antonony Ny fitsangatsanganana isan'andro dia manampy ny alika voan'ny leishmaniasis hanamafisana ny hozatra sy taolana, ary hanatsara ny fitepon'ny fony. Saingy tsy tokony hanery azy ireo hanao hetsika ara-batana mihitsy isika rehefa reraka na mijaly.
Shampoo manokana. Misy fiantraikany be amin'ny hoditra io aretina io, ka rehefa mandro ny biby dia tsy maintsy ataontsika amin'ny shampooing manokana ho an'ny alika misy leishmaniasis.
Fampiononana sy fialan-tsasatra. Tokony hanome fampiononana faran'izay betsaka ao an-trano ny biby: fandriana malemilemy amin'ny faritra mafana sy zara raha mandeha, tohatra na arabe mba hahafahany miakatra sy midina avy eny amin'ny toerana avo, sns. Izay rehetra ilaina amin'ny biby dia mahazo aina sy milamina.
Fitsidihan'ny biby. Ity aretina ity dia mitaky fitsaboana veterinera tsy tapaka, ary noho izany, ny fizahana matetika. Ilaina izany mba hananan'ny alikantsika fiainana manana kalitao lehibe.
Fomba fisorohana aretina
Na dia tsy misy fomba miaro ny alikantsika 100% aza, azontsika atao ny mampihena ny vitan'ny moka amin'ny fanarahana torolàlana vitsivitsy:
Mampiasà repellants. Tsy mety diso izy ireo, saingy afaka mampihena ny fahafahan'ny fanafihana amam-borona mihoatra ny 80%. Izahay dia miresaka momba ny vozon'akanjo antiparasitika, pipety ary takelaka. Tsy tokony hitantana samirery ireo vokatra ireo isika, fa anontanio mialoha ny dokotera.
Mametaka harato moka. Ny harato moka dia manakana ity bibikely ity tsy hiditra ao an-tranontsika, raha mbola tsy mihoatra ny roa milimetatra ny lavaka ao amin'ny harato, izay mitovy habe amin'ny volom-borona.
Avelao hatory an-trano ny alika. Ny alika mandany alina any ivelany dia azo inoana fa voan'ny virus noho ireo mety mijanona ao an-trano. Tokony horaisina fa ny ora fiasan'ny moka indrindra dia ny takariva sy maraina.
Ataovy ny fandalinana isan-taona. Amin'izao fotoana izao ny ankamaroan'ny toeram-pitsaboana biby dia manao fitiliana ra isan-taona amin'ny alika rehetra izay tian'ny tompony hanao izany. Ataon'izy ireo izany hahitana raha mijaly amin'ny leishmaniasis ilay biby ary manomboka mitsabo azy haingana araka izay tratra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » aretina » Fikarakarana alika misy leishmaniasis
Inona no dikan'ny fihenan'ny alika?